Ny Nokia 8.1 andrasana dia ny kinova iraisam-pirenena an'ny Nokia X7 efa natomboka | Androidsis
Tamin'ny volana lasa teo, nampiditra ny smartphone i Nokia Nokia X7 any Sina. Ankehitriny, ny orinasan Finnish dia mety hiasa amin'ny fanombohana iraisampirenena izy tenany ary izany rehetra izany dia vokatry ny fankatoavana navoakan'ny ekipa Bluetooth SIG.
Vinavina ny olona fa ny fanontana iraisam-pirenena an'ity terminal ity dia mety nahazo ny fanamarinana Bluetooth avy amin'ity masoivoho ity. Izany dia vokatry ny fisehoana finday Nokia vao tsy ela izay misy ny maodely TA-1136.
Niseho tamin'ny tranokala Bluetooth SIG ilay terminal. Midika izany fa mety miomana ny hampiditra finday vaovao alohan'ny faran'ity taona ity ny orinasa, ankoatry ny Nokia 9, ny sainam-pirenena manaraka.
Raha tafaporitsaka, ny Nokia TA-11362 dia manana fanohanana ny Bluetooth 5.0. Mety ho kely ny mety ho telefaona ambanyFa mariho ny zava-misy fa ny MediaTek Helio A22 sy Helio P22 SoCs ambany dia mifanaraka ihany koa amin'ny kinova Bluetooth ity.
El Nokia X6 ary ny Nokia X5 Nampahafantarina voalohany tany Sina izy ireo, saingy avy eo navotsotra ireo mpifaninana iraisam-pirenena. Noho izany, misy ny mety hivoahana tsy ho ela ny fanontana iraisam-pirenena an'ny Nokia X7. Mety hamely ny tsena ho Nokia 7.1 Plus. Na izany aza, ny tsaho mifanipaka, izay niseho roa herinandro lasa izay, dia nilaza izany Nokia X7 dia azo alefa ho Nokia 8.1 fa tsy Nokia 7.1 Plus eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ny fitaovana dia mety hanana fika mitovy amin'ny Nokia X7. Noho izany, antenaina fa ho tonga miaraka amin'ny efijery LCD IPS misy marika, izay ho diagonal 6.18 santimetatra miaraka amin'ny famaha FHD +. Mandritra izany fotoana izany, ao anatiny dia hanana ny Snapdragon 710, 4/6 GB RAM, 64 GB na 128 GB ny habaka fitehirizana anatiny, fikirakirana fakan-tsary indroa misy 13 sy 12 megapixel an'ny marika ZEISS, fakan-tsary 20 megapixels sy ny batterie 3.500 mAh.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Nokia 8.1 andrasana dia ho ny andiany iraisam-pirenena amin'ilay Nokia X7 efa natomboka
Google dia manala ny fampiharana App Cloner amin'ny Play Store